Waa Maxay Sababta Neymar Ganaax Labo Kulan Ah Garka Loogu Geliyay Xilli Uu Ku Dooday In La Cunsuriyeeyay? – Laacibnet.net
Waa Maxay Sababta Neymar Ganaax Labo Kulan Ah Garka Loogu Geliyay Xilli Uu Ku Dooday In La Cunsuriyeeyay?
September 17, 2020 Balaleti
Xidiga Paris Saint-Germain Neymar ayaa ganaax labo kulan ah garka loo geliyay ka dib markii uu u gacan qaaday xiddiga Marseille Alvaro Gonzalo kulankii Axadii ee horyaalka Faransiiska.
Warbixin ay soo saareen maamulka horyaalka ayaa lagu sheegay in baaritaan uu ku socdo daafaca Alvaro Gonzalo ka dib markii uu Neymar ku eedeeyay xiddiga reer Spain uu hadalo cunsurinimo ah ku yiri intii ay ciyaarta socotay, iyadoo shan ciyaaryahan casaan la siiyay kulankaas ka dib dagaal dhexmaray labada kooxood.
Daafaca PSG Layvin Kurzawa ayaa la ganaaxay lix kulan isagoo muteystay ciqaabtii ugu sareysay madaama uu qeyb ka ahaa dagaalka halka daafaca Marseille Jordan Amavi isna la ganaaxay seddex kulan.
Neymar ayaa ganaax ku seegay kulankii ay xalay PSG 1-0 kaga badisay Metz madaama uu casaan qaatay kulankii Marseille si la mid ah xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Leandro Paredes. Labada ciyaaryahan ayaa sidoo kale ganaax ku seegi doona kulanka Axada ee ay martida u yihiin kooxda Nice.
Neymar iyo Parades oo labaduba ganaax hal kulan kale ah garka loo geliyay ayaa ku soo laaban doona garoomada kulanka ay la ciyaarayaan kooxda Stade de Reims 27ka bishaan September.
Weeraryahanka Marseille Dario Benedetto ayaa isna hal kulan lagu ganaaxay halka Angel di Maria oo caalamad diginiin ah qaatay intii ay ciyaarta socotay balse aan lagu ciqaabin dagaalka ayaa looga yeeray kulan ay yeelanayaan gudiga dishibiliinka isbuuca soo socda isagoo lag eedeeyay inuu ciyaaryahan kale ku candhuufay.
Neymar ayaa sabab u yeelay sababta gacanta u la tagay Gonzalo isagoo sheegay in xiddiga reer Spain uu ku yiri hadalo cunsurinimo ah,. Daafaca Marseille ayaa beeniyay eedeymaha Neymar.
Maamulka horyaalka Ligue 1 ayaana sheegay in baaritaan lagu sameynayo kiiska cunsurinimada ee uu Neymar ku eedeeyay Gonazalo.